दुईपाङ्ग्रे सवारीमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल यामाहा ब्राण्डले नेपालमा करीब डेढ दशकको व्यावसायिक यात्रा तय गरिसकेको छ । यामाहाको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता एमएडब्ल्यू इण्टरप्राइजेजले नेपाली ‘बाइक राइडर’हरूको चाहनाअनुरूप विभिन्न मोडल र सेग्मेण्टका मोटरसाइकल विक्री गर्दै आएको छ...
नेपाली बजारमा उपलब्ध यामाहा मोटरसाइकलका केही मोडल र मूल्य
नेपाली बजारमा उपलब्ध यामाहा मोटरसाइकलका केही मोडल र मूल्यमोडल : वाईजेडएफ आर१५भी२ माइलेज : ३० देखि ३५ केएमपीएल मूल्य : ३ लाख २२ हजार ९ सय रुपैयाँमोडल : एफजेड १६ इञ्जिन क्षमता : १५३ सीसी इन्धन क्षमता (ट्याङ्की) : १२ लिटर मूल्य : १ लाख ९९ हजार ९ सय रुपैयाँमोडल : इण्टाइसरइञ्जिन क्षमता : १२३...
यामाहा ब्राण्ड उत्पत्तिको कथा
तपाईं–हामीमध्ये धेरैले यामाहा ब्राण्डका मोटरसाइकल चढ्ने गर्छौं । कहिलेकाहीँ ‘यामाहा’ भन्ने ब्राण्ड कसरी रहन गयो होला भन्ने जिज्ञासा मनमा आउन सक्छ । यस जिज्ञासालाई मेटाउन त्यसको कथा प्रस्तुत छ – यामाहा ब्राण्ड यस कम्पनीका संस्थापकको अन्तिम नामबाट रहन गएको हो । यामाहा कम्पनीका...
सुरज मानन्धर बिजनेश हेड, एमएडब्ल्यू इण्टरप्राइजेज प्रालियामाहाका मोटरसाइकल ‘फन्नी’ र ‘एक्सक्ल्युसिभ’ छन् नेपालमा यामाहा मोटरसाइकलको बजार अवस्था कस्तो छ ? आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को तुलनामा गत आवमा व्यवसाय केही घटे पनि बजार हिस्सा भने बढाउन सफल भएका छौं । हामीले प्रिमियम सेग्मेण...
रेसिङमा यामाहाको गौरवशाली ५० वर्ष
यामाहाले ‘फिम (एफआईएम) ग्राण्ड प्रिक्स वल्र्ड च्याम्पियनशिप’मा भाग लिएको ५० वर्ष पूरा गरेको छ । ५० वर्षे इतिहास बनाएको उपलक्ष्यमा कम्पनीले यसलाई भव्यताका साथ मनाएको जानकारी दिएको छ । यामाहाले सन् १९६१ मे महीनामा पहिलोपटक उक्त प्रतियोगितामा भाग लिएको थियो । यस अवधिमा ३७ ओटा ‘राइडर...
यामाहा एसजेड–आर नेपाली बजारमा
एमएडब्ल्यू इण्टरप्राइज प्रालिले भर्खरै ‘यामाहा एसजेड–आर (अद्यावधिक भर्सन)को मोटरसाइकल नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । १ सय ५३ सीसी इञ्जिन क्षमताको उक्त मोटरसाइकलको मूल्य रू. १ लाख ८१ हजार ९ सय रहेको छ । साथै, कम्पनीले ग्राहकमा उच्चस्तरीय प्रडक्टसम्बन्धी चेतना विकास गर्ने उद्देश्यले ‘...
नेपालमा यामाहा टू ह्विलर्स
यामाहा मोटरसाइकल दक्षिण एशियामा सन् १९८५ मा नै प्रवेश गरेको हो । भारतमा यो ‘५०–५०’ को सहकार्यमा इस्कोट्स गू्रपले आयात गरेको हो । सन् २००८ मा मित्सुई एण्ड कम्पनी र यामाहा मोटरसाइकल कम्पनीले संयुक्त लगानी गर्ने सहमति गरे, जसअन्तर्गत यी दुई कम्पनीको सहकार्यमा ‘इण्डिया यामाहा मोट...
यामाहाको आर १५ भी २ नेपाली बजारमा
नेपालका लागि यामाहाको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्ल्यू प्रालिले नयाँ मोडलको ‘आर१५ भी२ ह्वाइट रेड’ मोटरसाइकल सार्वजनिक गरे को छ । सार्वजनिक गरिएको मोटरसाइकलको ‘स्टक’ सीमित रहेकाले पहिले आउने ग्राहकलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कम्पनीले यामाहाको कुनै पनि विक्रेताले ‘बूक’ गर...
वाईजेडएफ–आर१५ लाई ‘इण्डिया डिजाइन मार्क अवार्ड’
यामाहाको सुपरस्पोर्टी मोडल ‘वाईजेडएफ–आर१५’ ले ‘इण्डिया डिजाइन मार्क (आईमार्क) अवार्ड’ जित्न सफल भएको छ । १ सय ५० सीसीको उक्त मोटरसाइकलले आईमार्क अवार्ड जित्न सफल भएको हो । सन् २००८ मा दक्षिण एशियाली देशमा यो मोटरसाइकल पहिलोपटक विक्री शुरू गरिएको हो । सन् २०११ मा यसलाई थ...
फक्सवागन कम्पनीका उत्पादनलाई नेपालमा प्रिमियम गाडीका रूपमा लिने गरिन्छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने फक्सवागनका विभिन्न मोडल नेपालका शौखिन कारराइडरमाझ अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । जर्मनीमा उत्पादित फक्सवागन कार नेपालमा सन् १९६० मै भित्रिएको हो । नेपाली बजारमा प्रवेश गरेको आधा शताब्दी नाघिसक्दा पनि का...